China Novel Coronavirus (SARS-CoV-2) Multiplex PCR Kit mpanamboatra fotoana sy mpamatsy | Liming Bio
Ity kit PCR mora tohina sy vonona hampiasaina ity dia azo alaina amin'ny endrika lyophilized (dingana fanamainam-panafana) ho fitehirizana maharitra. Ny kit dia azo entina ary tehirizina amin'ny hafanan'ny efitrano ary maharitra mandritra ny herintaona. Ny fantsom-bokatra premix tsirairay dia misy ny reagents rehetra ilaina amin'ny fanamafisana PCR, ao anatin'izany ny Reverse-transcriptase, Taq polymerase, primers, probes, ary substrates dNTPs. Mila ampiana rano distul 13ul sy modely RNA alaina 5ul fotsiny izy, avy eo azo ampiharina sy hohamafisina amin'ireo fitaovana PCR.
Ny milina qPCR dia tokony mahafeno ireto fepetra manaraka ireto:
1. Ampidiro fantsom-bokatra PCR 8 strip 0.2 ml
2. Manana fantsona fikarohana mihoatra ny efatra:
Loko efa voafaritra mialoha
Ny fahasahiranan'ny fitaterana rozin'ny hatsiaka mamantatra ny mpamantatra asidra nokleopaly Novel Coronavirus
Rehefa entina lavitra ireo mpamantatra ny asidra niokleika mahazatra, ny fitehirizana sy ny fitaterana mangatsiaka (-20 ± 5) ℃ dia ilaina mba hahazoana antoka fa mihetsika hatrany ny biôaktifan'ny anzima ao amin'ireo reagents. Mba hahazoana antoka fa mahatratra ny fenitra ny mari-pana dia ilaina ny ranomandry maina marobe kilao isaky ny boaty misy reagent fitiliana asidra nukôlika na dia latsaky ny 50g aza, fa maharitra roa na telo andro fotsiny. Raha ny fijerin'ny fampiharana ny indostria, ny lanjan'ny reagents navoakan'ny mpanamboatra dia latsaky ny 10% (na kely lavitra noho io sanda io) ao anaty kaontenera. Ny ankamaroan'ny lanja dia avy amin'ny ranomandry maina, fonosana ranomandry ary boaty misy foam, ka lafo be ny vidin'ny fitaterana.
Tamin'ny martsa 2020, nanomboka nipoaka be ny COVID-19 tany ivelany, ary nitombo be ny fangatahana mpamantatra asidra nokleopaly Novel Coronavirus. Na eo aza ny halafon'ny fandefasana ireo reagents amin'ny rojo mangatsiaka, ny ankamaroan'ny mpanamboatra dia mbola afaka manaiky azy io noho ny habetsahana sy ny tombom-barotra avo lenta.
Saingy, miaraka amin'ny fanatsarana ny politikam-pirenena momba ny fanondranana ho an'ny vokatra manohitra ny areti-mifindra, ary koa ny fanatsarana ny fifehezana ny firenena amin'ny fivezivezin'ny olona sy ny lozisialy, misy ny fanitarana sy ny tsy fahazoana antoka amin'ny fotoanan'ny fitaterana an'ireo reagents, izay niteraka olana lehibe teo amin'ny vokatra. amin'ny fitaterana. Ny fotoana maharitra fitaterana (ny fotoana fitaterana sahabo ho antsasaky ny volana dia mahazatra) dia miteraka tsy fahombiazan'ny vokatra matetika rehefa tonga amin'ny mpanjifa ny vokatra. Izany dia nanelingelina ny ankamaroan'ny orinasa mpanondrana asidra niokleika.
Ny haitao Lyophilized ho an'ny reagent PCR dia nanampy tamin'ny fitaterana ny mpamantatra ny asidra nokleona Novel Coronavirus eran-tany
Ny reagents PCR azo volavolaina dia azo entina sy tehirizina amin'ny hafanan'ny efitrano, izay tsy afaka mampihena ny vidin'ny fitaterana ihany, fa misoroka ihany koa ireo olana ara-kalitao nateraky ny fizotry ny fitaterana. Noho izany, ny lopilopy ny reagent no fomba tsara indrindra hamahana ny olan'ny fitaterana any ivelany.
Ny Lyophilization dia miteraka hatsiaka ny vahaolana ho lasa fanjakana mafy orina, ary avy eo atsofohy sy avahana ny etona rano ao anaty fivoahana. Ny solute maina dia mijanona ao anaty kaontenera miaraka amina fangaro sy hetsika mitovy. Raha ampitahaina amin'ny reagents ara-tsiranoka mahazatra, ny mpamantatra ny asidra nokleopaly nokleopaly novokaina novokarin'i Liming Bio dia manana ireto toetra manaraka ireto:
Fiorenan'ny hafanana mahery vaika: afaka miaraka amin'ny fitsaboana maharitra 56 ℃ mandritra ny 60 andro, ary ny morphology sy ny fahombiazan'ny reagent dia mijanona tsy miova.
Fitehirizana sy fitaterana mari-pana ara-dalàna: tsy mila rojo mangatsiaka, tsy mila mitahiry amin'ny mari-pana ambany alohan'ny hamoahana, hamoaka tanteraka ny toerana fitahirizana mangatsiaka.
Vonona-to-fampiasana: lyophilizing ny singa rehetra, tsy mila fananganana rafitra, ialana amin'ny fahaverezan'ny singa manana viscosity avo toa ny anzima.
Target Multiplex ao anaty fantsona iray: ny tanjon'ny detection dia manarona ny genonavirus vaovao ORF1ab, ny N, ny S mba hialana amin'ny genovariation virus. Mba hampihenana ny ratsy ratsy, ny gen RNase P olombelona dia ampiasaina ho fanaraha-maso anatiny, mba hihaonana amin'ny filan'ny klinika ny fifehezana ny kalitaon'ny santionany.
Boky Torolàlana PCR / MSDS
Taratasy momba ny fitsaboana
Taratasy ho an'ny marary
Previous: Fitsapana haingana momba ny antibiotika SARS-CoV-2 IgM / IgG
Manaraka: Fitsapana haingana an'ny antigen an'ny SARS-CoV-2
Kitapo Pcr tena izy amin'ny fotoana marobe Multiplex
Sars-Cov-2 Rna Pcr Kit amin'ny ora tena izy
Coronavirus ho an'ny fitsapana Covid-19, Vibrio Cholerae O1 / O139 Antigen Combo Fitsapana haingana, Fitsapana haingana momba ny Coronavirus Ket, Kitapo fitsapana Igm / Iggrapid, H. Pylori Ag Rapid Test dia mamantatra ny antigen, Kitapo fitsapana antigona Coronavirus,